beedka beero - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda beero baradho
Calaamadda: beero baradho
Go'aamada beeritaanka: Qoto dheer ee tuberku iyo fogaanta u dhaxaysa dhirta baradhada
Digriiga abuurka waxaa lagu beeraa godad yar yar ama jeexjeexyo beero gacmeed oo uu sameeyay beeriye. Caadi ahaan, qoto-dheeraanta beeritaanka waa inay noqotaa sida ...
Bilawga beeritaanka baradhada xilliga cusub. Natiijooyinka sahanka ee majaladda "Nidaamka Baradhada"
Gu'ga 2022 inta badan gobollada Russia waxay u noqdeen kuwo soo daahay oo halkii laga jeclaa: diirimaadka muddada dheer la sugayay ee gobolka Volga, tusaale ahaan, si lama filaan ah ayaa isbeddelay ...
Kuban, beeritaanka baradhada ayaa ka bilaabmay dhulalka guryaha, ganacsiyada beeralayda ayaa bilaaban doona horraanta Abriil
In Territory Krasnodar bilaabay in ay beeraan baradho. 6 oo hektar ayaa loo qoondeeyay beerista sanadkan. Madaxa Timashevsk, Nikolai Panin, ...
U diyaar garowga beerista baradhada ayaa lagu soo gabagabeeyay gobolka Leningrad
Beeraha gobolka Leningrad, 13,3 kun oo tan oo baradho shinni ah ayaa lagu kaydiyay kaydinta, iyada oo loo baahan yahay 10 kun oo tan, ...
Barasaabka Bryansk Bogomaz ayaa ka digay gabaabsi suurtagal ah oo baradhada cas ah
4-tii Maarso, Alexander Bogomaz ayaa ka qayb qaatay shir uu guddoominayay Wasiirka Beeraha ee Ruushka Dmitry Patrushev oo ku saabsan xasilinta qiimaha cuntada iyo sugnaanta cuntada. ...
Beeritaanka baradhada iyo beerista khudaarta dhulka bannaan ayaa ka bilaabmay Crimea
Beerista khudaarta dhulka bannaan iyo beerista baradhada ayaa ka bilaabmay Crimea. Sidaa waxaa ku dhawaaqay Ku-simaha Wasiirka Beeraha ee Jamhuuriyadda Kazakhstan Alime Zaredinova, ...
Beerista baradhada ayaa ka bilaabatay Turkmenistan
Beerista baradhada ayaa ka bilaabatay gobolka Lebap ee dalka Turkmenistan, sida uu qoray wargeyska rasmiga ah ee Turkmen. Sannadkan, khudaarta iyo ubbada ee ...
Beerista baradhada ayaa ku dhow gabagabo gobolka Moscow
Qiyaastii 97% mugga qorshaysan ee baradhada ayaa lagu beeray gobolka Moscow. Tan waxaa ku dhawaaqay Wasiirka Beeraha iyo Cuntada ee Gobolka Moscow ...